စိတ်ဓါတ် ခွန်အား – santhit.com
လူတစ်ယောက် တော်တာက သူ့ရဲ့ကံကောင်းမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက် တော်တာက သူ့ရဲ့ကံကောင်းမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ . အကယ်လို့ ကံကောင်းလို့တော်တယ်ဆိုရင် အများဆုံးသူတစ်ကြိမ်ပဲတော်နိုင်မှာပါ။ အကယ်၍ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ၊ အချိန်ကြာရှည်စွာ လူတစ်ယောက်ကတော်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအရာကို အရည်အချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ . အရည်အချင်းက ခက်ခက်ခဲခဲ လေ့ကျင့်လို့ရလာတာပါ။ “ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော်တာလဲ မွေးရာပါ ပါရမီလား” ဆိုပြီးတချို့ကမေးကျတယ်။ အဖြေက “မဟုတ်ပါဘူး။” . တော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက သူများထက် * ပင်ပင်ပန်းပန်းလေ့ကျင့်လို့၊ * အရာမှန်သမျှသင်ယူလေ့လာလို့၊ * သူများထက်ပိုဖတ်လို့ ၊ * သူများထက်ပိုကြည့်လို့၊ * သူများထက်ပိုကြုံတွေ့ရလို့၊ * သူများထက်ပိုပြီးနာကျင်ရလို့ပဲ …
Khant Hein March 9, 2018 Knowledge, စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
လက်ရှိ အလုပ်ကိုမနှစ်သက် ၊ ဝင်ငွေကလည်း မကောင်းဘူး ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ?
လက်ရှိ အလုပ်ကိုမနှစ်သက် ၊ ဝင်ငွေကလည်း မကောင်းဘူး ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ? ♦လက်ရှိ အလုပ်ကနေထွက်ကို ထွက်သင့်ပါတယ် ။( ကြိုက်လည်းမကြိုက် ၊ ငွေလည်း အဆင်မပြေမှတော့ ထွက်သာထွက်ပါ။ မကြိုက်ပေမယ့် ငွေ အဆင်ပြေနေရင်သာ ထပ်စဉ်းစားရမှာ။ အခုကတော့ ထွက်ကို ထွက်ရမှာပါပဲ ) ♦ဘယ် အချိန်မှာ ထွက်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ သေချာ ချင့်ချိန်ရပါမယ်။ အဲ့လိုချင့်ချိန်နိုင်ဖို့အတွက် ၁။ မိသားစုရဲ့ တစ်လ အသုံးစရိတ် ဘယ်လောက် ၂။ လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှု…
Khant Hein February 27, 2018 Knowledge, စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
အရမ်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်း တွေကိုဖတ်စေချင်သည် ။ အရမ်းစိတ်ညစ်ပြီး ဘ၀ကိုအရှူံးပေးချင်နေပြီလား ။ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ ၊ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်နော် ။
အရမ်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်း တွေကိုဖတ်စေချင်သည် ။ အရမ်းစိတ်ညစ်ပြီး ဘ၀ကိုအရှူံးပေးချင်နေပြီလား ။ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ ၊ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်နော် ။ အရမ်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်း တွေကိုဖတ်စေချင်သည် ။ အရမ်းစိတ်ညစ်ပြီး ဘ၀ကိုအရှူံးပေးချင်နေပြီလား ။ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ ၊ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်နော် ။ ” လောက ” မှာ… ကိုယ့်ကို စိတ်ညစ် အောင်လုပ်တာလည်း ” ကိုယ်ပါပဲ ” ကိုယ် ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေး နိုင်တာလည်း ” ကိုယ်ပါပဲ ”…
Khant Hein February 26, 2018 Knowledge, စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
ဘဏ်​ဓားပြတိုက်​ခံရ​သောပုံပြင်မှရရှိနိုင်သော အဖိုးမဖြတ်​နိုင်​သည့်​ အ​တွေးအ​ခေါ်များ
ဘဏ်​ဓားပြတိုက်​ခံရ​သောပုံပြင်မှရရှိနိုင်သော အဖိုးမဖြတ်​နိုင်​သည့်​ အ​တွေးအ​ခေါ်များ တစ်ခါတုန်းက_ကွမ်ကျိုးမြို့က ဘဏ်တစ်ခု နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး ဓါးမြအတိုက်ခံရတယ်။ ဘဏ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ဓါးမြဗိုလ်က အားလုံးကြားအောင်လှမ်းအော်လိုက်တယ်။ “တစ်ယောက်မှ မလှုပ်နဲ့! ငွေဆိုတာ အစိုးရ ပိုင်တာ! အသက်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ပိုင်တယ်! နားလည်တယ်နော်!” အားလုံး ငြိမ်ကျသွားသည်။ သင်ခန်းစာ (၁) – လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ကြည့်စေလိုတဲ့ ရှုထောင့်ထိ ဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါ! အမျိုးသမီးငယ်ငယ် ချောချော တစ်ဦးက ကယောင်ကတန်းဖြင့် စားပွဲအစွန်းပေါ်မှာ ကိုးယိုးကားယား ဖြစ်လို့နေသည်။ ဓားမြဗိုလ် လှမ်းအော်လိုက်သည်။ “ဟိုကလေးမ.. ဘာတွေလျှောက် လုပ်ပြနေမှန်း…
Khant Hein February 26, 2018 February 26, 2018 Knowledge, စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
အခက်​အခဲ​တွေ ရှုံးနိမ့်​ခြင်း​တွေဆီက လွတ်​​မြောက်​ဖို့ ဒီအချက်​​တွေကိုလိုက်​နာပါ
အခက်​အခဲ​တွေ ရှုံးနိမ့်​ခြင်း​တွေဆီက လွတ်​​မြောက်​ဖို့ ဒီအချက်​​တွေကိုလိုက်​နာပါ ၁။ မပျင်းပါနဲ့ ပျင်းရိနေတာက အချိန်ကုန်စေပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မနေပါနဲ့။ လုပ်စရာရှိတာ အခုပဲ ထလုပ်လိုက်ပါ။ ၂။ ဘ၀ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရှောင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ ဘ၀ကို ပုံပြင်စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ သဘောထားပါ။ တစ်ချို့စာမျက်နှာတွေ မရှိဘူးဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကိုမှ မကျော်ပဲ တစ်မျက်နှာချင်းလှန်ဖတ်သွားရင် ဘ၀ရဲ့ရသကို ခံစားရမှာပါ။ ၃။ တသမတ်တည်း မလျှောက်လှမ်းပါနဲ့ အသံရင်းမြစ် ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ပဲ့တင်သံအဖြစ်ကို ကျေနပ်မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအိပ်မက်အသစ်တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ သတ္တိမွေးပါ။ ၄။ အချိန်ကောင်းကို စောင့်မနေပါနဲ့…
Khant Hein February 26, 2018 စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
စိတ်​ညစ်​​နေလား သူငယ်​ချင်း…မင်းလိုပဲ စိတ်​ညစ်​​နေသူ​တွေ အများကြီးပါ
ဘာကြောင့် စိတ်ညစ်ခံမှာလဲ.. …………………………….. စိတ်​ညစ်​​နေလား သူငယ်​ချင်း… မင်းလိုပဲ စိတ်​ညစ်​​နေသူ​တွေ အများကြီးပါ။ တစ်​​ယောက်​ယောက်​ကို ရင်​ဖွင့်​ ချင်​​နေလား သူငယ်​ချင်း.. ခန​တော့ သည်းခံ မြိုသိပ်​ လိုက်​ပါ။ တစ်​ခါတစ်​​လေ ကျရင်​​လေ ဒီ​နေ့ ​ပြောချင်​နေတဲ့ စကား ကို ​နောက်​တစ်​ရက်​ ​ရွေ့လိုက်​လို့လည်း အများကြီး ​နောက်​ကျ မသွားပါဘူး ။ မင်းမမျိုသိပ်​နိုင်​​တော့ရင်​ ​နောက်​​နေ့မှ.. ငါ့ကို​ပြောပြ​နော်​။ ​သေချာပါတယ်​ ​နောက်​​နေ့ကျ ငါ​မေးတဲ့အခါ.. မင်းက “ဒီလိုပါပဲ ဘာမှ မဟုတ်​​တော့ပါဘူး ” လို့…
မစိုးရိမ်ကျောင်းဒကာကြီးကို သူ့မိတ်ဆွေတွေက ပြောကြတယ်။ “ခင်ဗျားကသာ ငွေတွေအများကြီး ကုန်ကျခံပြီး ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လှူထားတာ၊ ခင်ဗျားကိုယ်တော်တွေက စာမကျက်ပဲ ခြင်းခတ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတာပဲ” တဲ့။
မစိုးရိမ်ကျောင်းဒကာကြီးကို သူ့မိတ်ဆွေတွေက ပြောကြတယ်။ “ခင်ဗျားကသာ ငွေတွေအများကြီး ကုန်ကျခံပြီး ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လှူထားတာ၊ ခင်ဗျားကိုယ်တော်တွေက စာမကျက်ပဲ ခြင်းခတ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတာပဲ” တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျောင်းဒကာကြီးက ဟေ.. ဟုတ်လား၊ ဒါဆို ငါလည်း လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကျောင်းကိုလိုက်သွားတယ်။ ကျောင်းရောက်လို့ သူ့မိတ်ဆွေတွေလိုက်ပြတဲ့နေရာ သွားကြည့်တော့ ဦးဇင်းတွေ ခြင်းခတ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူ့မိတ်ဆွေတွေကလည်း လက်တွေ့မြင်ပြီမလားဆိုတဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ပေ့ါ။ ဒါနဲ့ ကျောင်းဒကာကြီးက သူ့မိတ်ဆွေတွေကို ကျောင်းပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ ကျောင်းပေါ်ရောက်တော့ သံဃာတွေ ရာနှင့်ချီပြီး စာဝါလိုက်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။…
Khant Hein January 28, 2018 စိတ်ဓါတ် ခွန်အား, ဘာသာတရား No Comments
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကရလိုက်တဲ့အတုယူဖွယ်ရာစိတ်ဓာတ် ….,. ဆံသဆိုင် (ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်) တစ်ဆိုင်တွင် ဆံပင်ညှပ်သူများနှင့် စည်ကားနေ၏။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ်ယောက်မှ လွဲပြီး ကျန်ဆံသဆရာ အားလုံးမှာ ဆံသပေးနေကြလေသည်။ ထို ဆံသဆရာလူငယ်လေးတစ်ဦးသည် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာဖြင့် ဆံပင်လာညှပ်မည့် ဧည့်သည်ကို မျှော်နေမိ၏ ။ ယနေ့မှစကာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူ့ကို ဆံသခွင့် ပေးလိုက်သည်။ သူသည် ထိုဆိုင်တွင် အောက်ခြေ သိမ်းအလုပ်များနှင့် ခေါင်းလျှော်သည့် အလုပ်တွေ၂ နှစ်လုပ်ရင်းဆံပင်ညှပ်ပညာကို သင်ယူခဲ့ရပြီး ယနေ့သည် သူ၏ပထမဆုံးသော ဧည့်သည်ကို ဆံသပေးရမည့် နေ့ ဖြစ်နေလေသည်။ သူတို့ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ဆံသပေးဖူးသော်လည်း…
Khant Hein November 16, 2017 Knowledge, စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
ဒါဖတ်ပြီး မငိုပါနဲ့။ ပိုပြီး သိတတ်ပါ
ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ဝဲမိလို့..သူငယ်ချင်းတို့ကိုလဲပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်… “ရှင့် အဖွားကြီးကို ဘယ်နေ့ပို့မှာလဲ ? ” … နံနက် စောစောစီးစီး ဇနီးသည် ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်မရှည်သံကို စိတ်မချမ်းမြေ့စွာ ကြားလိုက်ရသည်…။ “ပို့မှာပေါ့ကွာ.. မင်းကလဲ.. ငါ့အမေလောက် မျက်စောင်းထိုးနေတာပဲ ” “အို…ထိုးရမှာပဲ… ရှင့်အမေက နေရာတကာပါနေတာကိုး… ကျွန်မ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး.. ရှင့်အမေကို ဒီတစ်ပတ်ထဲ ပို့ရင်ပို့.. မပို့ရင်တော့ ကျွန်မ သားလေးခေါ်ပြီး အမေ့အိမ် သွားနေတော့ မယ်…” “ကဲ.. ဒီတစ်ပတ်ထဲ ပို့ရင် ပြီးတာပဲ မှတ်လား..” ပြောပြီး ကျွန်တော်…
admin September 16, 2017 စိတ်ဓါတ် ခွန်အား No Comments
တစ်ည ၅၀၀၀ နဲ့သီချင်းဆိုရင်း ဘဝစာမေးပွဲကိုအမေနဲ့အတူ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နွေးနွေးချစ်ဖွယ်
[Zawgyi] တစ်ည ၅၀၀၀ နဲ့သီချင်းဆိုရင်း ဘဝစာမေးပွဲကိုအမေနဲ့အတူ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နွေးနွေးချစ်ဖွယ် မြို့တော်ချစ်ဖွယ်ရဲ့တစ်ဦးတည်သောသမီးဖြစ်သူ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်က ဆယ်တန်းကျောင်းသူ ဘဝကတည်းကသီချင်းသီဆိုရင်း ကျောင်းစရိတ်ရှာခဲ့ရကြောင်း၊သူ့မွေးပြီး ၄ရက်အကြာမှာပဲ အဖေနဲ့အမေ လမ်းခွဲခဲ့ကြောင်း၊ကလေးဘဝကနေအခုချိန်ထိ အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပေမယ့် အဖေ့ကိုလည်း အပြစ်မမြင်သလို ဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ တာတွေကိုလည်း ၀မ်းမနည်းဘဲ ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်တည်လာကာ ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း နဲ့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ခက်ခဲစွာကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပုံကိုအခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “အဖေက နွေးတို့နဲ့ အတူမနေတော့ နွေးတို့သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် နွေးသီချင်းတွေဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခါဆိုရင် တစ်ည ၅၀၀၀ ရတယ်။…
admin August 9, 2017 စိတ်ဓါတ် ခွန်အား, သရုပ်ဆောင် No Comments
Santhit.com မှာဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ချို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ။
အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့သတင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လူအများကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Santhit.com ကရေးသားဖော်ပြတဲ့သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေမှတစ်ပါး အခြားသတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံများဟာ သက်ဆိုင်သူများရဲ့မူပိုင်သာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Celebrity Food Health Knowledge Knowledge Lifestyle local new News Relationship sports Technology true love Uncategorized ကဗျာ စာအုပ်​များ စိတ်ဓါတ် ခွန်အား ထင်ရှားသူများ နည်းပညာ ဖတ်စရာ ဘာသာတရား မူခင်းသတင်း ရက်ရက်စက်စက် သတင်း သရုပ်ဆောင် သရဲစာအုပ်​များ ဟာသ အချစ်သာ အမျိုး သမီး ကဏ္ဍ အလှပုံများစုစည်းမူ အလှအပ ဥပဒေ။ ဆေးပညာ ဆေးပညာ ဗေဒင် ကဏ္ဍ လေ့လာစရာ
(သင်(သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝှိက်မှာ” မှဲ့” ရှိနေလား👨
၈ နှစ်သား အရွယ်ကလေးကြောင့် အဝတ်လျှော်တဲ့ ‘…မ..’ဗိုက်ကြီးသည့်ဖြစ်ရပ်
( မီးသင်္ဂြိုဟ်ပြီး ၇ လအကြာ သေဆုံးသူ ပြန်ရောက်လာ၍ မိသားစု ထိတ်လန့်အံ့သြ )
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။
Copyright © 2018 santhit.com. Theme by Colorlib Powered by WordPress